Iloft ezaliswe ukukhanya 40m2 phakathi kwesixeko kunye nendalo - I-Airbnb
Iloft ezaliswe ukukhanya 40m2 phakathi kwesixeko kunye nendalo
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguDiana
INQAKU ELIBALULEKILEYO: NGENXA YEMILINGANISO YE-COVID SIYAKWAMKELELA UBUGCWA-MALI KWIKHAYA ELINYE KUPHELA!
Indawo ephezulu ibekwe ngokuzolileyo nangokupholileyo kwigadi entle ecaleni kwayo yonke imitsalane yaseTervuren kwaye inokufikelela kufutshane kwizithuthi zikawonke-wonke (itram, iibhasi) ukuya eBrussels, eLeuven naseZaventem Airport. Indawo egqibeleleyo yokudibanisa isixeko kunye nendalo okanye umsebenzi kunye nolonwabo.
Le loft iyinxalenye yendlu emi kwigadi entle enkulu. Inomnyango owahlukileyo kwaye ibekwe kumgangatho wokuqala inokukhanya kwendalo okuninzi.Inomphezulu omalunga ne-40m2 kwaye inegumbi lokuhlambela elineshawa, isinki kunye nendlu yangasese.Kukho ibhedi enye (200 * 160cm) yabantu aba-2 kunye ne-sofa yokulala ekhululekile (200 * 160cm) yabantu ababini.Kukho i-wifi yasimahla, iTV yekhebula, ifriji encinci, umatshini wekofu kunye nemicrowave. Kukho i-2 yangaphandle ye-pit induction cooker yombane yokwenza isidlo esincinci.I-loft ayifanelekanga kubantwana abancinci (ukuya kwi-4-5 iminyaka), ngenxa yecala elivulekileyo lesitebhisi.
Indawo entle yokufumanisa ubunjani beTervuren kunye nomtsalane, iZonienwoud, iBrussels kunye neLeuven nokunye okuninzi.Indawo ephezulu ibekwe ecaleni kwePaki yeTervuren kwaye ilungele ukuHamba, ukuHamba iNordic, ukubaleka, iMTB kunye nokukhwela iBhayikhi.Kubantu abasebenza eBrussels, izithuthi zikawonke-wonke ziyakusa apho kwi-20 min.
Ukwenza oku kube yindawo yokuhlala engenakulibaleka ababuki zindwendwe bakhona kwiingcebiso. Sithetha isiDatshi, isiJamani, isiFrentshi nesiNgesi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tervuren